အီရန်အဘို့အဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစော်ဘွားများအတွက် Start ကိုအလုပ်အကိုင်!
Quick Post WhatsApp နံပါတ်!
ယခု: သင်၏အဆင့်မြှင့်ထားသောနံပါတ်ကိုဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသို့ချပါ me100% Free!
သင်၏ WhatsApp နံပါတ်ကိုအခြားသူများအားအဘယ်ကြောင့်ပို့လိုသနည်း။
WhatsApp အတွက်သင်၏ပညာရှင်ခေါင်းစဉ် - စုဆောင်းသူ / အလုပ်ရှာသူ*
ဤသည်မှာပရိုဖိုင်းတွင်သင်၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်၊ စုဆောင်းသူများသည်သင်၏ဖုန်းကို Google မှမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း
* အရေးကြီးဆုံး 100 စကားလုံးများဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်ရရန်သင်အများဆုံးအာရုံစိုက်ရမည့်နေရာဖြစ်သည်။
အဆင့်မြှင့်တင် - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ
ပြီးပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းရှိရန်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပါ! - သင်၏ပထမဆုံး Dubai City Company တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသင်း ၀ င်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
Upgrade Option ကို:
ကျွန်ုပ်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါတွင်ရှိသည်
ဆောင်းပါး & ဒူဘိုင်းတွင်ကြော်ငြာများတင်ပါ
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ on သြဂုတ်လ 19, 2018
ဒူဘိုင်းအတွက် Persian အလုပ်အကိုင်များ
ဂျော့ဘ်အတွက် ဒူဘိုင်း အီရန်အဘို့။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့အခုအီရန်နိုင်ငံကနေအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဖြစ်ကြသည် ယူအေအီးမှာသူတို့ကိုအားမရ။ ယေဘုယျအားဖြင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ, ကျွမ်းကျင်သူများအများကြီးစကားပြော။ အသုံးပြုခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရရန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ငါတို့သည်ယခုအီရန်ကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများတစ်ဦးတိုးပွားလာမြင်ကြပြီနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းမျှော်လင့်နေပါတယ် တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီ။ ယခုအဘို့, အီရန်အခြေစိုက်လူတွေ။ လုပ်နိုင် အလုပ်ရှာပါ ထဲမှာ စော်ဘွား။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်း၊ Abun Dhabi နှင့် Sharjah တို့တွင်အလုပ်သမားများကိုနေရာချထားသည်။ ဒီတော့သုံးပါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ဝန်ဆောင်မှုများ။ ကျိန်းသေနိုင်ပါတယ် အကူအညီအလုပ်ရှာဖွေသူများ.
ယေဘုယျအားဖြင့်အီရန်လုပ်သားများစကားပြော။ ရှစမတ်အမှုဆောင်အရာရှိစကားပြောနေကြသည်။ သငျသညျသဘောတူဒီတော့လျှင် ယူအေအီးမှာအလုပျလုပျဖို့။ နေရာပြောင်းရွှေ့အတွက်အထူးကုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏သူတို့ကို။ ကျိန်းသေနိုင်သလား သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီ။ ဒါကြောင့်အတွက်အလားအလာန်ထမ်းသစ်ကိုအားမရ ယူအေအီး။ အချိန်ယူပြီးပြီးမြောက်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Arabic အဘိဓါန်လူအမျိုးမျိုးကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်၌ဤအတူကျနော်တို့ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အသစ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစား။ ကောင်းပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ မင်းတကယ်လိုအပ်တာက ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအတွက်အသုံးပြုသောအချက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာ, အင်ဒီးယန်း နှင့် ပါကစ္စတန်ကျွမ်းကျင်သူများ။ ယခုပင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုသုံးနိုင်သည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မနှင့်ပိုပြီး။ အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များကျင်းရတဲ့နေကြသည်။
ဒီတော့ဘာကိုတကယ်အမှုဆောင်အရာရှိကနေလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ အတော်ကြာနောက်ခံစစ်ဆေးခြင်းကိုလုပျထုံးလုပျနညျးလုပျ။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ကနှင့်အတူစကားပြောဘို့အရာအားလုံးအဆင်သင့်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူ။ ကျနော်တို့အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုပို့ချလျက်ရှိသည်။ ထိုအရာခပ်သိမ်းအဆင်သင့်ရှိခြင်းပြီးနောက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အီရန်အလုပ်သမားအားမရ။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကြောင့်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ပြုရမည်ဖြစ်သည်အများအပြားအမှုအရာရှိပါသည်။ ဥပမာ ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နေရာထိုင်ခင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ရှိသမျှကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
အဆိုပါ စော်ဘွားလူတိုင်းငှားရမ်းနေကြ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အတွေ့အကြုံအချို့ကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရအီရန် ကျောင်းသားများနှင့်အသစ်သောအနိမ့်အတွေ့အကြုံရှိကလူ။ Aree သေးရှိခြင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ဆိုတော့အဘို့အခွင့်အလမ်း။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာလူတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ ထို၌ ဒူဘိုင်းမြို့ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ပြည့်ဝ၏။ အမြောက်အများ အိန္ဒိယကနေပြည်တော်ပြန် ဥပမာ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံကနေပြည်ပကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်။
ဒါဆိုမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ ထဲမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သာအကောင်းဆုံးလုပ်သားများနှင့်နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများသာ။ သူတို့လိုချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေကျယ်ပြန့်ရှိသည်ဖို့အများကြီးပိုကောင်းသည် အမ်းမရိတ်အတွက်အတွေ့အကြုံ။ ဒါပေါ့, ပိုလတ်ဆတ်နှင့်ကျောင်းသားများမှာလည်းအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ သို့သော်အမှု၌, ကပိုပြီးအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများမဆိုလိမ့်မည်! ဂိတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လို ဒူဘိုင်းနှင့် ပတ်သက်. knowleadge ရသင်ကူညီ.
အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းရှိပါသည်။ အားလုံးတကယ်လိုအပ် CV ကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, စာရွက်စာတမ်းများ supporting ။ နှင့်သင်တန်း၏, တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်။ ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏က်ဘ်ဆိုက်တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေစုဆောင်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကြှနျုပျတို့လညျးအများကြီးနောက်ခံစစ်ဆေးခြင်းကိုမလုပ်ကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ယျအတွက်အတော်လေးယုံကြည်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညီညွတ်သောအာရပ်အတွက်အီရန်များအတွက်ဒူဘိုင်းနှင့်ထို့နောက်ဂျော့ဘ် စော်ဘွားလှသောဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားပါ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ကြ ပြည်ပမှာအလုပျသမားမြားအတှကျန်ဆောင်မှုများ.
လိုအပ်သောအရာကိုဒီတော့တစ်ခုတည်းသောအရာ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက် အီရန်အဘို့။ အသေးစိတ်ဒေတာနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစျေးကွက်အပေါ်ဒီတော့ရှည်လျားသည်။ ထို ကျမတို့ကလည်းဘယ်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးနေကြတယ်။ အမှု၌ငါတို့အပိုထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်ထားသူအားဖုန်းခေါ်ပြီးကူညီရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ နေရာ ကျနော်တို့နိုင်သမျှဒူဘိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့အီရန်နိုင်ငံသားသလောက်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လူသိများလို့ပဲ။ ဒါကစော်ဘွားဖြစ်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားမွကွေီးပျေါမှာအကောင်းဆုံးနေရာ.
အဆိုပါလုပ်ခယူအေအီးအတွက်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကျိန်းသေတာကပိုမိုမြင့်မားအီရန်အတွက်ထက်ဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အားလုံးလျှောက်ထားအတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးအပေါ်မူတည်ပါသည်။ သို့သော်လျှင် ကျနော်တို့အီရန်ကယူဆ လုပ်ခလစာ။ အမ်းမရိတ်ကနေပိုက်ဆံ။ ကမ္ဘာ၏အခြားမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်သုံးဆနီးပါးပိုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိ။ ထိုမှတပါး, အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များယူအေအီးအတွက်ပူဇော်။ အတူသူတို့အဘို့ Are MBA ဘွဲ့ရပညာရေး။ အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားများနှင့်မန်နေဂျာအဖြစ်။ နှင့်သင်တန်းဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေ၏။ ဤသည်ကိုအခြား Arabic အဘိဓါန်တိုင်းပြည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ရုံစီးပွားရေးကိုအများကြီး သာ. ကောင်း၏။
ဒါကြောင့်, အနိမ့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူသစ်ကိုအလုပျသမား။ get တစ်ဦး ဒူဘိုင်းနှင့် Abun အဘိဓါန်ဒါဘီအတွက်အလုပ်။ သူတို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းသို့သော်မအကြီးဆုံးစစ်ဆေးမှုများ။ နှင့်မြင့်မားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူတွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း။ သူတို့မယ်ဆိုရင်သေချာဖွဲ့စည်း ခြောက်လကိန်းဂဏန်းများအလုပ်အကိုင်များစေရန်မျှော်လင့်ထား။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအချိန်ပေးဖို့ရှိသည်။ ထိုအခါငါတို့တှငျသငျ့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကြော်ငြာလျှောက်လွှာမှာအလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့။ သို့ အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုသင်တို့အဘို့ပေး.
အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များအများကြီးဒူဘိုင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားနှင့်အတူလူများအတွက်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒူဘိုင်းအတွက်အီရန်လူဦးရေရဲ့တစ်ဝှမ်း 8% ရှိပါတယ်။ ဒါကသန်းအလုပ်သမားများ၏နီးပါးတစ်ဝက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် စဉ်းစားရန်အမှုအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အမ်းမရိတ်နှင့်အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီတွင်နေထိုင်နေစဉ်။ ယူအေအီးရှိလူများ၏ဤငွေပမာဏနှင့်အတူ။ ဖြစ်နိုင်ချေ ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် ဒါကြောင့်မြင့်တက်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖာစီပီသငျသညျသကဲ့သို့ရှည်လျား။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျယူအေအီးအတွက်တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအီရန်ကနေလူတွေအများကြီးရှိပါသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများကြီးကောင်းတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများရှာဖွေတာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အအီရန်အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်အိုင်တီ နှင့်သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ်အလုပ်ထုတ်လုပ်။ ကြောင်းအားလုံးဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်နိဂုံးချုပ်အီရန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရိုးရှင်းပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်။ ထို့အပြင် ယူအေအီးတှငျနထေိုငျ။ သို့မဟုတ်ပင် ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအလုပ်ရရန်သင့်အားကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေပါတယ်။ အားလုံးသင့်ရဲ့ updated CV ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခါငါတို့လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဖွဲ့ကသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်စတင်သည်။ ဒီတော့အလားအလာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအလုပ်ရှာဖွေသူများမှစီးဆင်းလိမ့်မယ်ပူဇော်။ လူတွေကလည်းကျိန်းသေကောင်းသောပညာရေးလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရှာပါ။
100% အာမခံချက်ပေးသော Dubai City ကုမ္ပဏီ။ တိုင်းအတွက် အလုပ်ရှာဖွေနေ လျှောက်လွှာငါတို့ကုမ္ပဏီမှတဆင့်လုပ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ပြည်ပမှာအားမရလုပ်သားများ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်အီရန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုခက်ခဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်တစ်ဦးဝန်ထမ်းရဖို့ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနေသည်။ အမြဲတမ်းကူညီပေးနေလက်ပေးခြင်းအဆိုပါစုဆောင်းမှုအသင်း။ ဤအရာကိုစိတ်ထဲထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းကြည့်ပါ အပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင် အပိုင်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Emirates မှာအလုပ်ရှာတာကငါတို့အဖွဲ့ကအကောင်းဆုံးပဲ။ သို့သော်ငြားလည်း, သင်အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုစစျဆေးနိုငျ။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအကောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိခြင်းနေကြသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။
ဤသည် template ကိုပု sidebar မှာမယ့် Widgets တွေထောက်ခံပါတယ်။ တဦးတည်း Add သို့မဟုတ်အပြည့်အဝအကျယ် layout ကိုအသုံးပြုပါ။
© 2019 အလုပ်များ - အလုပ်အကိုင် - ခရီးသွားခြင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ Muffin အုပ်စု